Sida Loogu Isticmaalo Zoomkaaga H6 sidii Isdhexgalka Maqalka ee Mevo | Martech Zone
Sida Loogu Isticmaalo Zoomkaaga H6 sidii Isdhexgalka Maqalka ee Mevo
Khamiis, Juun 25, 2019 Khamiis, Juun 25, 2019 Douglas Karr
Mararka qaar dukumiintiyada la'aanta websaydhada runti waa wax laga xumaado waxayna u baahan tahay tan tijaabo iyo qalad inta aadan helin wax si sax ah u shaqeynaya. Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa ah xarunta ugu weyn ee xogta bartamaha galbeed waxayna dalka ku hogaamiyaan shahaadooyin. In kasta oo aan riixno waxyaabaha mararka qaarkood, waxaan rabaa inaan ballaariyo awooddooda si ay u siiyaan qiimo badan rajooyinka iyo macaamiisha iyada oo loo marayo dhexdhexaadinno kale.
Toos-u-socodsiinta sharraxaadda qawaaniinta cusub, wareysiga qaar ka mid ah xirfadleyda warshadaha, ama keliya bixinta xoogaa u hoggaansamid ama talo ammaan ah waqti ka waqti waxay noqon kartaa mid aad u qiimo badan. Marka, waxaan ka caawiyey inay dhisaan istuudiyaha lagu duubo qoraalada, duubista fiidiyowyada, iyo toos u socodka.
Waxay leeyihiin qol ballaadhan oo aan ku kala gooyay gobol kuna aaminay daahyo maqal ah si aan u yareeyo dhawaaqa. Waxaan go aansaday in aan raaco nashqad yar oo la qaadan karo oo ah a Kaameradda live-streaming, a Dhaweeye H6 taariikhqorihii, Iyo fiilooyinka wireless-ka shure wireless. Tani waxay ka dhigan tahay inaan ka sameysan karo goobo aan tiro lahayn si aan wax uga qoro - min miiska guddiga illaa meesha fadhiga iyo wax kasta oo u dhexeeya.
Dabcan, markii aan helay dhammaan qalabkii ku jiray waa markii aan isku dayay arrimo. Nidaamka Zoom H6 iyo Shure wuxuu u shaqeeyaa si bilaa cillad ah, laakiin waxaan haystay waqti badan oo aan iskudayay inaan ogaado sida loo isticmaalo Zoom H6 sida muuqaalka maqalka ee Mevo.
Zoom H6 iyo Mevo Boost
Mid ka mid ah qoraalkan ayaa ah inaad gabi ahaanba rabto inaad isticmaasho Mevo Boost, oo ay ku jiraan awoodda isku xidhka shabakadda ee qulqulka, iyo sidoo kale USB-ga loogu talagalay maqalka, oo leh awood iyo batteri dheeri ah. Waxaan nidaamka ku tijaabiyay dhowr iyo toban qaab oo kala duwan… anigoo isku dayaya inaan xog ka soo xaabto Dukumiintiyada kooban ee Mevo kaas oo muujinaya Zoom H4n oo aan ahayn H6… oo leh kala duwanaansho la taaban karo.
Runtii way ka dhib yaraayeen sidii aan malayn lahaa:
Ku dhaji Zoom H6 Mevo Boost adoo adeegsanaya USB. Fiiro gaar ah: Tani MA AWOONAYSO Zoom H6 (Boo!) Markaa waa inaad ka faa'iidaysataa baytariyada.
Daar Mevo ka dibna Zoom H6.
Zoom H6 On, waxaad u baahan tahay inaad dhex maraan nidaamka menu oo u dhigay sidii ah dhexgalka maqalka waayo, duubista heesaha badan waayo, PC / Mac adoo adeegsanaya awood batteri.
Waa kuwan shaashaduhu siday u kala horreeyaan (fiiro gaar ah ha u yeelanin shayga menu-ga la iftiimiyay, waxaan ka soo qaatay tallaalladaas buugga Zoom H6)
U adeegso Zoom-kaaga H6 sidii Wajahadad Maqal ah
Xulo Multi Track si aad u isticmaali karto dhammaan waxyaabaha aad makarafoonka ku gasho
MUHIIM: Xulo PC / Mac adoo adeegsanaya awoodda batteriga
Mevo USB Input
Hadda waxaad awoodi doontaa inaad u aragto USB-ga cod maqal ah oo Mevo ah! Kaliya taabo si aad isugu xirto waxaadna diyaar u noqon doontaa inaad tagto.
Xusuusin dhinac ah, dukumiintiyada loogu talagalay Zoom H4n ayaa sheegaya in wax soo saarka maqalka uu ahaado 44kHz halkii uu ka noqon lahaa 48kHz. Zoom H6-ka, ma awoodin inaan wax ka beddelo soo-noqnoqodka wax soo saarka markii loo isticmaalay inuu ahaado interface interface USB ah. Hadaad taqaan sidaan, ii soo sheeg! Waxay u egtahay 48kHz sidaa darteed ma hubo inay lagama maarmaan tahay.
Daah-: Waxaan ku isticmaalay nambarkeyga ku xirnaanta Amazon boostadan.
Tags: mevokor u qaad mevoiska ilaalizoom h6
Maxay yihiin Istaraatijiyadaha ugu sarreeya ee SaaS Platform si ay u Koraan
Hagaha Ugu Dambeeya ee Dhisida Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta Dijital ah